Wasiirka Caafimaadka Oo difaacay adeegyadda Cisbitaalka Guud oo laga dayriyay | FooreNews
Home wararka Wasiirka Caafimaadka Oo difaacay adeegyadda Cisbitaalka Guud oo laga dayriyay
Wasiirka Caafimaadka Oo difaacay adeegyadda Cisbitaalka Guud oo laga dayriyay
Hargeysa Foore)-Wasiirka Wasaarada Caafimaadka Somaliland Dr. Xuseen Maxumed Maxamed (Xuseen Xoog) oo shir Jara’id maanta ku qabtay Xarunta wasaarada Caafimaadka Somaliland ayaa si Adag u beeniyay wax uu ugu yeedhay Hadal aan Xaqiiqda ku dhisnayn oo ay Faafiyeen qaar ka mid ah Warbaahinta Maxaliga ah oo ay wax kaga sheegayaan adeega Cisbitaalka Guud ee Caasimada Hargaysa.
Waxa shirkaasi Jara’id ka soo qayb galay Masuuliyiin ka tirsan Xukuumada,Dhakhaatiir ajaanib ah oo ka hawl-gala cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
Wasiirka Wasaarada Caafimaadku waxa uu sheegay in Ujeedada Shirkan Jaraa’id ay la xidhiidho Hadalo maalmahan ku soo baxayay Warbaahinta Maxaliga ah gaar ahan wargeysyada ay ka mid yihiin, Haatuf iyo Saxansaxo ee ka soo baxa magaalada Hargeysa.
Wasiirku waxa uu ka warbixiyay waxqabadkii wasaarada Caafimaadka mudadii Sanadka iyo Badhka ahayd ee u dambeysay,waxa kale oo uu tilmamaay in Dhakhaatiir badan oo Ajaniba ah isla markaana Madashaas ku sugnaa ay wadanka u yimaadeen inay Adeegyo Caafimaad oo u badan Lacag la’aan ka fuliyaan cisbitaalka.
Wasiirka Caafimaadku mar uu ka hadlayay dhinaca talaalka in qaar ka mid ah Saxaafadu ay si khaldan u tabiyeen dhawaan mar uu ka hadlay arrimaha la xidhiidha Xanuunka Booliyada, taasoo keentay in Gudo iyo dibadba lala soo xidhiidho.
Wasiirka waxaa uu intaasi ku daray inuu Cisbitaalka Guud ee Magaalada Hargeysa taagan yahay halkii ugu fiicnayd tan iyo Xiligii Gumaysigii Ingriiska.
Dr. Xuseen Xoog waxa uu sheegay in Wasaaradiisu ay Bilowday inay u fidiso Adeeg qaliin oo lacag la’aan ah Hooyooyinka ay ku dheeraato foosha Dhalmadda.
Waxa kale oo uu sheegay in markii u horaysay ay bilaash ama lacag la’aan ay ka dhigeen Haweenka ku dhala cisbitaalka Guud.
Waxa kale oo halkaasi Ka hadlayay Masuuliyiin ka Tirsan Gudida madaxa bannaan ee Cisbitaalka Guud ee Caasimada Hargaysa kuwaas oo dhamaan sheegay sida ay ugu Faraxsan yahiin Hawlaha Caafimaad ee wakhti Xaadirka ka socdo Cisbitaalka Guud ee Magaalada Hargeysa.
Previous PostWasiirka Daakhiliga oo khudbad u jeediyay 364 arday Oo Tababar ciidan uga socdo Mandheera Next PostWasiirka Ganacsiga oo Khubaro Faransiis ah ka gudoomay 500 Buug oo ay ka qoreen ataarta qadiimiga ah